Real Estate and Law Firm Archives - Myanmar Mega Property Co.,Ltd
မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍အများအသိမှားဖြစ်သည့်ပုံစံ၁၀၅ အင်္ဂလိပ်အခေါ် (ဝမ်းနော့ဖိုဒ်)သည် မြေတစ်ခု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမဟုတ်ပေ။၄င်းအား မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)ဟု ခေါ်တွင်သည့် ဦးပိုင်လုပ်ကွက်တစ်ခု သို့မဟုတ် မြေကွက်တစ်ကွက် သို့မဟုတ် မြေဧရိယာတစ်ခု၏အကျယ်အဝန်းကို သတ်မှတ်ထားသော မြေပုံစကေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ရေးဆွဲထားသော သက်သေခံမြေပုံ/သက်သေမခံသောမြေပုံသာဖြစ်သည်။ မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၆ မှာမူ အဆိုပါမြေများ၏ ...
( က ) အာမခံပေးခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်။၁။ တရားစီရင်ရေးသည် လုပ်သားပြည်သူတို့ကို လုံခြုံမှုပေးခြင်းဖြစ်၍ ၊ တည်ဆဲ ဥပဒေအရ အာမခံ မပေးမနေရ ( Bailable ) ပြဋ္ဌာန်းထားသောအမှုများတွင် တရားခံအား အာမခံ ပေး၍ အလွတ် ...
𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝘽𝙚𝙙𝙧𝙤𝙤𝙢 This ‘sanctuary’ should appear to be relaxing, not too busy and cluttered.1. Remove everything off the dresser ...
𝙏𝙝𝙚 𝙠𝙞𝙩𝙘𝙝𝙚𝙣 The most important room in the house has always been the kitchen. Here are some of the things ...
မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍အများအသိမှားဖြစ်သည့်ပုံစံ၁၀၅ အင်္ဂလိပ်အခေါ် (ဝမ်းနော့ဖိုဒ်)သည် မြေတစ်ခု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမဟုတ်ပေ။၄င်းအား မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)ဟု ခေါ်တွင်သည့် ဦးပိုင်လုပ်ကွက်တစ်ခု သို့မဟုတ် မြေကွက်တစ်ကွက် သို့မဟုတ် မြေဧရိယာတစ်ခု၏အကျယ်အဝန်းကို သတ်မှတ်ထားသော မြေပုံစကေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ရေးဆွဲထားသော သက်သေခံမြေပုံ/သက်သေမခံသောမြေပုံသာဖြစ်သည်။ မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၆ မှာမူ အဆိုပါမြေများ၏ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှု ရာဇဝင် (History of Holding) ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း မြေပုံ/မြေရာဇဝင်ခေါ် မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၅/၁၀၆ သည်သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးသို့ မိမိတို်လျောက်ထားအသုံးပြုလိုစေသော ကိစ္စရပ်အတွက် ပူးတွဲရမည့် စာရွက်စာတမ်းမျှသာဖြစ်၍ ၄င်းတို့ကို မသိနားမလည်သောသူများမှ ပုံစံ၁၀၅ပြသလျင် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတစ်ရပ်အဖြစ်ထင်မြင်မှတ်ယူနေတတ်ကြသဖြင့် ၄င်းအားလက်ဝယ်ထားရှိကိုင်ဆောင်ထားရှိရုံမျှနှင့် ပိုင်ဆိုင်စိတ်ချရပြီဟု မမှတ်ယူသင့်ကြပေ။ ယနေ့ခေတ်တွင် လယ်မြေများအား ပုံစံ၁၀၅ ပုံံစံ ၇ကျပြီးဆို၍ ကြော်ငြာရောင်းချလာသော ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုများအား တွေ့မြင်နေရပြီး တောင်သူလယ်သမားများအား ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် သားစဉ်မြေးဆက် ဘဝအာမခံချက်ရရှိစေခြင်းငှါ …
ပုံစံ ၁၀၅ နှင် ပုံစံ ၇ Read More »